Banyere Anyị-Phu Ly Bao Co. Ltd.
15+ Afọ Ahụmahụ na akpa Manufacturing
Akụrụngwa n'ichepụta ihe kemgbe 2004, ebuputara mba 30 + gụnyere US, Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East wdg. ISO9001, SGS, OA gbaara.
Dabere na ụdị ihe, anyị na-emepụta ABS / eyi / PC / Aluminium alloy / Oxford ákwà akpa.
Anyị akpa ikpe uru bụ waterproof, elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ, eco-enyi na enyi, inogide, fechaa wdg Ọtụtụ-eji na njem, kwa ụbọchị ojiji, nkwalite, azụmahịa njem wdg Ọtụtụ ihe, anyị nwere a Vietnam factory na ha bụ ndị factory price.
Ndị ọrụ, mpaghara na ikike
Dị ka ọkachamara na-emepụta akpa, PLB Vietnam nwere ụlọ ọrụ ọhụụ nke 8000 Sqm, 100 + ndị ọrụ mpaghara nwere nkà. nnukwu kwa ọnwa mmepụta anyị na-enye ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọnụahịa dị elu maka ndị ahịa, ha niile kwekọrọ n'ụkpụrụ mba ụwa.
N'ime afọ ole na ole gara aga nke mmepụta na njikwa na nyocha, PLB guzobere usoro njikwa mma ya. Gafere na ISO9001: 2000 àgwà usoro asambodo na ISO14000 usoro asambodo njikwa gburugburu ebe obibi. PLB mejuputa echiche nke okike bara uru okike iji gboo mkpa di iche nke ndi ahia di iche, ma nyekwa ndi ahia nsogbu nke nsogbu oru.
Factorylọ ọrụ ahụ nwere slitting igwe / blister igwe / punching igwe / igwe akwa akwa / ịcha igwe.
Anyị na-efe karịa 30 mba ahịa gafee ụwa. Na anyị n'ichepụta na ọrụ ike anyị nọgidere na-enwe ogologo oge imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ndị ahịa anyị.
Anyị tozuru okè Quality Control otu ịlele ngwaahịa tupu Mbupu, nke na-agụnye ckinglele iru mmiri n'ime ngwaahịa, ntụpọ, misprints, nkwakọ, wdg Asambodo: ISO, SGS, CE, RTS, ect.
Ọrụ kachasịsịja urs Na-achụso ịdị mma;